I-India yoKhenketho iphuma konke ngeFilimu, iMidlalo, iNkolo, ukuhlala, ukuSebenza
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-India yoKhenketho iphuma konke ngeFilimu, iMidlalo, iNkolo, ukuhlala, ukuSebenza
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lwaseIndiya lusetelwe
UMphathiswa weKhabhinethi kaRhulumente wase-Uttarakhand, uSatpal Maharaj, utshilo namhlanje ukuba urhulumente welizwe wongeze uncedo lwezemali kunye nolwezemali kwicandelo lezokhenketho kwaye uthathe amanyathelo aliqela ukulinceda.
Iphakheji ye-INR 200 crores sele ilungiselelwe ababoneleli beenkonzo abachaphazelekayo be-COVID njengabaqhubi bezokhenketho kunye nezikhokelo zemilambo, phakathi kwabanye.
Ukucwangciswa kuyenzeka kwizithili kulo lonke elaseIndiya ukuvuselela ukhenketho ngeendlela ezahlukeneyo ezinjengefilimu kunye nezemidlalo, inkolo, kunye nokuhlala kunye nokusebenza.
Usihlalo we-FICCI uthe ukuhamba, ukhenketho, kunye nokubuka iindwendwe zezokuqala ukubandezeleka kwaye mhlawumbi ziya kuba zezokugqibela ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ethetha ngeseshoni yeValedictory ye-2 Travel, Tourism and Hospitality e-Conclave: Resilience & The Road to Recovery ehlelwe yi-FICCI, Mnu. Maharaj, uMphathiswa weKhabinethi yoNkcenkceshelo, uLawulo lweZikhukula, ukuNkcenkceshela okuncinci, ukuVuna amanzi eMvula, uLawulo lwaManzi, i-Indo- Iiprojekthi zoMlambo iNepal Uttarakhand, uKhenketho, ukuHamba ngeeNdawo kunye neMiboniso yeNkolo, iNkcubeko, zithe imigaqo-nkqubo eyahlukeneyo yenziwa ngurhulumente ukunceda icandelo ukuba livuseleleke.
“Phakathi kwemigaqo-nkqubo nenkxaso-mali ethe yenziwa ngurhulumente, urhulumente ubonelela ngemigaqo-nkqubo yokutsala nokuxhasa icandelo lefilimu ukudubula ungene Uttarakhand. Ukongeza, sinikezele ngenkxaso-mali ye-INR 10 lakhs kwiinduli zetreyini kunye ne-INR 7.5 lakhs emathafeni phantsi kweDeendayal Homestay Yojana. Ngama-3,400 amakhaya abhalisiweyo ukuza kuthi ga ngoku phantsi kwesi sikimu, ”utshilo.
Ngapha koko, sithetha nge iindlela zakutshanje kwezokhenkethoUmnumzana Maharaj uthe abantu ngoku bajonge ukuhlala kwiindawo zokuhlala kunye nokusebenza. “Phantsi kuka Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, siqalisile ukubhalisa kwi-Intanethi. Sikwaphuhlise imijikelezo eyahlukeneyo ukukhuthaza ukuhamba kwalapha ekhaya, utshilo.